सधै विरोध नगरौँ , विदेशमा नेपालीहरूको राम्रो पहिचान बनाऊँ - Durbin Nepal News
प्रा. डा. दुर्गा दाहाल ८ चैत्र २०७६, शनिबार १८:४६
अमेरिकामा संगठित हुँदै आएका नेपालीहरूले आ-आफ्ना ठाऊँमा सामुदायिक विकासका लागि सामुदायिक केन्द्रहरूको स्थापना गरि आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गर्नु खुशीको कुरा हो । यसै सन्दर्भमा क्यालिफोर्नियाको राजधानी स्याक्रामेन्टोमा पनि यस किसिमको सामाजिक भावना जागृत भएको देखिएको छ । यहाँका सामाजिक अभियन्ताहरूले भर्खरै मात्र यो संगठन सिटीमा दर्ता गराई वेबसाईट समेत निर्माण गरेको स्थिति देखिन्छ ।
निश्चित रूपमा यो कार्य स्वागतयोग्य छ । तर सजिलो र बाधा- विघ्नविहीन पनि छैन । यस्ता कार्यहरूमा नेपालीहरूको त्यति धेरै सहयोग जुटेको देखिँदैन । हाम्रो इतिहास भारतीय अथवा पाकिस्तानी र अन्य समुदायहरूको तुलनामा अत्यन्त छोटो छ र समुदाय बनेपछि हामी पनि स्वतः बन्छौँ भन्ने भावनाको समुचित विकास हुन सकेको छैन । फेसबुकमा राख्न, खदा र माला लगाउन मोटो रकम दिने मौखिक बाचा गरेता पनि यथार्थमा पैसो नआएको धेरै नाम र प्रमाणहरू हामीसंग सुरक्षित छन भने कतिपय अवस्थामा संस्थाका पदाधिकारीहरूनै उठेको पैसा लिएर नौ- दुई एघार भएको अवस्था देखिन्छ ।
धर्म, राजनीति, साम्प्रदायिकता र जातीयता भित्र पसेर कोरोना भएको स्थिति पनि विद्यमान छ । जाँड- रक्सी खाएर नेपालीहरूले सामाजिक कार्य गर्न नसकेको स्थिति पनि देखिन्छ । तर यो संस्था अद्यपरिमित यी सबै रोगबाट मुक्त छ ।
जसले जेसुकै भनेता पनि नेपालीहरू बसेको सबै ठाऊँमा ढिलो-छिटो सबैले सामुदायिक केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्छ । कसैले कतै पनि कसैको विरोध गर्नु हुन्न । गच्छे अनुसार साथ, सहयोग र समर्थन दिनु पर्छ ।
हामीलाई यस्तो किसिमको संस्थाको आवश्यकता छ र रहन्छ । कसैले विरोध नगरौँ । यस्ता किसिमका नेपाली सामुदायिक संस्थाहरूको स्थापना गरि विदेशमा पनि नेपालीहरूको राम्रो पहिचान बनाऊँ ।
यस्ता किसिमका संस्थाहरू पारदर्शी र ज़िम्मेवार हुनु पर्छ । समुदायसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका व्यक्तिहरूले यस्ता कार्यहरूको शुरूवात गर्नु पर्छ । अध्ययनशील, अनुशासित र अनुभवी पनि हुनु पर्छ । कसैले बोकेको व्यक्ति भयो भने त्यसले काम गर्न सक्तैन । समुदायले रूचाएको व्यक्ति हुनु पर्छ ।
८ चैत्र २०७६, शनिबार १८:४६ मा प्रकाशित